Nau Hnuk Dinh Mi Nu Hna Nih An Hnuk Hang Kong An Ruah Sual Theu Tawn Mi Bia Halnak Le Bia lehnak.. Nau Sem Tlai Mi Nu Nih Cun Rel Bak Ding – Onlinenungak
Nau Hnuk Dinh Mi Nu Hna Nih An Hnuk Hang Kong An Ruah Sual Theu Tawn Mi Bia Halnak Le Bia lehnak.. Nau Sem Tlai Mi Nu Nih Cun Rel Bak Ding
#နို့ရည်ပူတယ် အေးတယ် ကျဲတယ်မကျဲဘူး ငြင်းနေကြသူများအတွက်ပါ ဖတ်ကြည့်ပါ
#မိခင်နို့ရည် နို့တိုက်ကလေးနှင့် လွဲမှားနေသောအယူများ
မေး- အမေ့နို့ရည်ပူလို့ ကလေးပိန်လား?
ဖြေ- မမှန်ပါ။ အမေ့နို့ရည်က ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ ထွက်၍ နွေးကောင်းနွေးမည်။ နို့ရည်မှန်သမျှ အာဟာရပြည့်ဝသည်။ အမေအာဟာရရှိအောင်စားပြီး ကျန်းမာနေသရွေ့ ကလေးစို့နေသရွေ့ နို့ရည်ပူခြင်းက စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ မလိုအပ်ဘဲ မိခင်ကို အပြစ်ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
မေး- နို့ရည်ကျဲလို့ ကလေးပိန်လား?
ဖြေ- မမှန်ပါ။ မိခင်နို့ရည်ကျဲခြင်း၊ ပျစ်ခြင်းက စိတ်ထင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သဘာဝအတိုင်း ထွက်သော မိခင်နို့ရည်က အကျဲအပျစ်ချိန်ဆပြီးသားဖြစ်သည်။ မိခင်အာဟာရပြည့်သရွေ့ နို့ရည်က အာဟာရဖြစ်ပါသည်။
မေး-ကျွန်မကလေးကို အရပ်ထဲက ခိုင်းလို့ နို့ရည်ချိုးပေးနေတာ ၃ လရှိပြီ။ စိုးရိမ်ရလား။
ဖြေ-မိခင်နို့ရည်က ကလေးအတွက် တန်ဖိုးရှိသော အာဟာရဖြစ်သည်။ အာဟာရကို မဖြုန်းတီးစေလိုပါ။ နို့ရည်ကို မတိုက်ဘဲချိုးပေးလျှင် က​လေးအာဟာရချို့တဲ့နိုင်ပါသည်။ ကလေးမိခင်ကို အကျိုးမရှိသော အကြံပေးခြင်းဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှု မပေးစေလိုပါ။
မေး-နို့ပွေးဖြစ်သောကလေးကို မိခင်ပါးစပ်နှင့် လျက်ပေးခိုင်းနေလို့ ဘာလုပ်ရမလဲ။
ဖြေ- မလျက်ပေးပါနှင့်။ လူတို့ ပါးစပ်ထဲတွင် ပိုးမွှားမျိုးစုံရှိသည်။ နို့ပွေးက နို့စို့ကလေးအရေပြားဖွံဖြိုးမှု ချို့ယွင်းနေသောကြောင့် ရောင်ရမ်းပြီး ယားခြင်းဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သောနည်းနှင့် ကုပါ။ လျက်ပေးသော မိခင်လျှာမှ ပိုးများသည် နို့​​ ပေွးတွင်​ကွဲနေသော အရေပြားအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ပိုဆိုးနိုင်ပါသည်။
မေး- နို့တိုက်ကလေး ပါးစပ်ပတ်လည်တွင် နီရောင်နေတာ အ​ေမက အပူစာတွေစားလို့လား?
ဖြေ- အချို့ ရင်သွေးငယ်များ၏ ပါးစပ်ပတ်လည်မှ အေရျပားက သွားရည်ကို ထိတွေ့ပါများလျှင် ရောင်တတ်ပါသည်။ အန္တရာယ်မရှိပါ။ အချိန်တန် အရွယ်ရောက်၍ သွားရည်ထိန်းနိုင်လျှင် ကောင်းသွားပါမည်။ အရေပြားရောင်တာဆိုးလွန်းလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီး လိမ်းဆေးတစ်မျိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ကလေးပါးစပ်ရောင်တိုင်း အ​ေမကို အပြစ်မတင်စေလိုပါ။
ဖြေ- ငြုပ်ဂောာင်းက နို့ထွက်များနိုင်သည်ဟု ရှေးကတည်းက အယူရှိသည်။ သိပ္ပံပညာရှင် ဆရာဝန္မ်ား၏ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ ငြုပ်ကောင်းစားလျှင် နို့ထွက်များသူရှိသလို မများသူလည်း ရှိသည်။ က​ေလးက မွေးမွေးချင်းအနံ့ခံတတ်၍ ငြုပ်ဂောင်းအနံ့ကြောင့် စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်ပြီး နို့စို့နည်းသွားနိုင်သည်လည်းရှိသည်။ စာရေးသူ အကြံပေးလိုသည်မှာ ငြုပ်ကောင်း ဟင်းခါးသောက်ခြင်းဖြင့်နို့ထွက်များအောင် စမ်းလိုက စမ်းပါ။ သို့သော် ငြုပ်ဂောင်းဟင်းခါးတစ်မျိုးထဲတော့ မသောက်ပါနှင့်။ အာဟာရဖြစ်စေသော အစာအုပ်စုများမျှတအောင်စားပါ။
မေး-နို့ထွက်များအောင် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းနေ့တိုင်းသောက်တယ်။ ရလား။
ဖြေ- တန်ဆေး, လွန်ဘေးပါ။ လက်ဖက်ခြောက်တွင်ပါသော ‘တန်နင်’ ဓာတ်သံဓာတ်အားနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ နို့တိုက်မိခင်နှင့် နို့စို့ကလေးအတွက် သံဓာတ် မရှိမဖြစ်လိုသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို နို့တိုက်မိခင်အား အလွန်အကျွံသောက်ရန် အားမပေးပါနှင့်။
မေး- ကလေးမွေးပြီး အ​ေမခေါင်းမလျှော်ရဘူးပြောနေလို့ ရလား?
ဖြေ- သဘာဝအတိုင်းကလေးမီးဖွားခြင်းသည် နာကျင်ခက်ခဲပြီး သွေးအလိမ်းလိမ်း ချွေးအလိမ်းလိမ်းနှင့် ကျော်ဖြတ်ရသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကလေးမွေးပြီး ခေါင်းလျှော်ရေချိုးခြင်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာကို သန့်စင်စေပြီး စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါသည်။ ရေချိုးခေါင်းလျှော်လိုသောမိခင်ကို မတားပါနှင့်။
မေး- ကလေးမွေးပြီး ဆပ်ပြာသုံးရင် နူတယ်ပြောကြလို့ ၃ လရှိပြီ ဆပ်ပြာမထိရသေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်နိုင်လဲဟင်။
ဖြေ- ဆပ်ပြာသည် လူ့ အေရျပား သန့်စင်ဖို့ ထုတ်ထားသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ လူတို့သည် Leprosy ပိုးကြောင့်နူသည်။ ကလေးမွေးပြီး ဆပ်ပြာသုံး၍ ရပါသည်။
မေး- ၁၂ လကျော်နို့တိုက်ပြီးရင် အမေနို့က အာဟာရမရှိတော့ဘူးဆို။
ဖြေ- အမေနို့က အာဟာရအမြဲဖြစ်ပါသည်။
*နို့မထွက်ခြင်း နို့ထွက်နည်းခြင်းသည် အကြောင်းများစွာရှိသည်။ ဤသို့ အခြေအနေကြုံတိုင်း မိခင်အား အပြစ်ပြောခြင်းမပြုရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
*နို့တိုက်မိခင်နှင့် နို့စို့ကလေးများကို မှန်ကန်သော နည်းလမ်းများနှင့် ကူညီနိုင်ကြပါစေဟု ရည်ရွယ်ရေးပါသည်။
Crd: Dr. Zyin Key